Taorian’ny horohorontany nandravarava, miverina tsikelikely amin’ny andavanandrony i Albania · Global Voices teny Malagasy
Nohaingoana hiatrika fankalazana Taombaovao ireo tanàna nidonan'ny horohorontany.
Voadika ny 11 Desambra 2019 5:17 GMT
Ny afovoan-tanànan'i Tirana, renivohitr'i Albania niomana ho amin'ny fankalazàna ny fetin'ny faran'ny taona . Sary an'i Ardi Pulaj, nahazoana alàlana.
Namoizana olona 51, naharatràna an'arivony sy namela tsy manana hialofana maro ary fahasimbàna trano marobe ilay horohorontany nanana tanjaka 6.4 namely an'i Albania talohan'ny mangirandratsin'ny 26 Novambra 2019.teo..
Toy ny tanàna tsy misy olona i #Tirana nandritra ireo andro efatra lasa. Maro ny olona no toa nandao ny tanàna mba handositra ny tebiteby ateraky ny mety mbola hiseho aorian'ilay horohorontany. Fahapotehana kely ao #Albania renivohitra raha jerena amin'izay nitranga tao #Durres eo akaiky eo.
Nambaran'ny Praiministra Edi Rama fa ho averina hodinihana ny tetibolan'ny firenena ho an'ny taona 2020 mba hanokanana 0.4 % amin'ny harinkarena faobe ho amin'ny fanorenana trano, nefa tsy hanohintohinana ny fandaniambolam-panjakana amin'ny sehatra hafa.
Mihoatra ny antsasak'ireo mponina 2,8 tapitrisa ao amin'ny firenena no nizàka ilay horohorontany. Ny 6 Desambra, trano miisa 7.077 no voalaza fa simba. Manodidina ny 12.000 ireo ollona lasa tsy manana hialofana. Ny ankamaroan'izy ireo dia nafindra aminà trano fandraisambahiny, ary ny governemanta dia nampanantena fa handoa ny hofany mandra-panorina ny tranon'izy ireny. Ny sasany kosa, araka ny tatitra, dia nisafidy ny hijanona anaty tranolay na any anatin'ny fiaran'izy ireo.
Olona maka sary ao afovoan-tanànan'i Tirana renivohitra, toerana nametrahana ireo haingo ho entina mankalaza ny Taombaovao. Sary an'i Ardi Pulaj, nahazoana alàlana.
Ilay sarivongan'ny maherifon'ny firenena eo amin'ny kianja nomena ny anarany Skanderbeg ao Tirana, renivohitr'i Albania. Sary an'i Ardi Pulaj, nahazoana alàlana.
Redi Muçi, injeniera amin'ny resaka fanorenana trano no sady profesora mampianatra ao amin'ny Fakiolten'ny Haibolantany sy ny Harena anaty tany ao Tirana, dia nilaza tamin'ny Global Voices fa tato anatin'ny taona viitsy, betsaka ireo trano avo najoro niaraka taminà tsy fetezan'ny fotodrafitrasa, na tsy nanaovana fandalinana momba ny haibolantany.
Ny 7 Desambra, nanomboka ny asany tamin'ny fitsidihana ny faritra Durrës ilay Lehiben'ny Fampanoavana vaovao, Olsian Çela. Nolazainy tamin'ny gazety fa hisy manampahaizana momba ny asa fanorenana trano ary hanadihady momba ny fahavoazana nateraky ny horohorontany.
“Tsapanay tsara ny zavatra nitranga. Nisy ireo olona tsy tomponandraikitra sy hary saina tsara saingy tsy nanaja ny lalàna ary, vokatr'izany, olona marobe no maty. Tsy tokony hiangatra ary mifanaraka tsara ny fampiharana ny lalàna, ary hahita vokatra mazava isika amin'ny fanadihadiana”, hoy ny Lehiben'ny Fampanoavana.
Nanambara ihany koa ny Praiminisitra Edi Rama fa efa manomana volavolandalàna iray izao ny biraony ho famaizana ireo orinasa, matihanina ary mpampiasa vola tsy niraharaha ny fakàna fahazoandàlana hanorina.
Ankizy mitangorona manodidina hazo noely ao amin'ny faritry ny Pazari i Ri (Tsena Vaovao) ao Tirana, renivohitr'i Albania. Sary an'i Ardi Pulaj, nahazoana alàlana.
Mandritra izany fotoana izany, tonga ireo fanampiana avy any ivelany : ny 6 Desambra, tonga tao Albania i Janez Lenarcic, ilay Kaomisera ambony avy amin'ny Kaomisiôna Eoropeana misahana ny Fitantanana ny Krizy, mba hanombana ireo fahavoazana sy izay hamehana amin'ny asa fanarenana. Efa nandefa 15 tapitrisa euros ny Kaomisiona Eoropeana (16.6 tapitrisa USD) ho an'i Albania mba hatao tahirim-pamonjena.
Ankoatra izay, nampanantena i Tiorkia fa hanorina trano 500 ao Albania. Hisy toeram-ponenana vaovao haorina ao Durrës, Tirana, sy Laç.
Nandresy nanoloana ny Skënderbeu ny FC Teuta, tarika mpilalao baolina kitra ao Durrës, tamin'ny 8 Desambra, nandritra ny lalao natao tao amin'ny kianja tao an-tanàna, toerana nametrahana ireo tsy manankialofana, herinandro maro talohan'izao. Nisy vitsivitsy tamin'ireo mpilalao ao amin'ilay tarika no nidonan'ilay horohorontany ihany koa. Nanambara ny FC Teuta fa izay tombony azo tamin'ny tapakila dia hatao fanomezana.